काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइक्यास प्रालिलाई नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली २०७२’ बमोजिम ‘आइक्यास प्रालि’ले दूरसञ्चार सञ्जाल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी सेवाको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त ग...
आजको विनिमयदर : अष्ट्रेलियन डलर १ को खरिदमा ९२.६० नेपाली रुपैयाँ, अमेरिकी डलर कति छ ?
महिला क्रिकेट टिमले भारतीय टिमसँग टी-२० र एक दिवसीय सिरिज खेल्ने
३० चैत, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले भारतको उत्तराखण्ड महिला क्रिकेट टिमसँग टी-२० र एक दिवसीय सिरिज खेल्ने भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघको शनिबार बसेको बैठकले यही अप्रिल तेस्रो हप्तादेखि नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिम र उत्तराखण्ड महिला क्रिकेट टिम, भारत बीच टी-२० र एक दिवसीय मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता सञ्चालनको तयारी गर्ने निर्णय […]
नेपालले नामिबियासंग एकदिवसीय सिरिज खेल्ने
२९ चैत, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले नामिबियासँग एकदिवसीय सिरिज खेल्ने भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को शनिबार बसेको बैठकले नेपालले नामिबियासंग मे महिनामा एकदिवसीय खेल्ने निर्णय गरेको क्यानले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । त्यसअघि नेपालले घरेलु मैदानमा वैशाख ४ देखि ११ गतेसम्म नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँग त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज खेल्दैछ […]
काठमाडौं । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश र प्रभु बैंक बीच बैंकिङ्ग साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका मुख्य निर्देशक सुदिप फुयालले क्यूआर कोड तथा डिजिटल बैंकिङ्गको महत्व तथा फाइदाहरु बारे जानकारी गराउँदै औषधि व्यवसायीहरुलाई क्यूआर कोडको वितरण गरे । शुक्रबार लुम्बिनी बुद्ध गार्डेन रुपन्देहीमा एक समारोह बीच प्रभुका प्रमुख व्यापार केन्द्र अधिकृत सुनिल राना र नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शिव ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरे ।&nbs
किरण एसियाको उत्कृष्ट १० खेलाडीको सूचीमा
२० चैत काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङ एएफसीकै साताको उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सूचीमा परेका छन् । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एएफसी इन्टरनेसनल प्लेअर अफ दि विकमा किरणसहित १० खेलाडी मनोनयनमा परेका हुन् । यसरी मनोनयनमा पर्ने किरण नेपालकै पहिलो खेलाडी समेत बने । एएफसीले पछिल्लो भएका […]
नेपाली खेलाडी सम्मिलित पाकिस्तान वुमन्स फुटबल च्याम्पियनसिप रद्द
१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय टिमका चार खेलाडीले खेलिरहेको पाकिस्तानको राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा रद्द भएको छ । पाकिस्तान फुटबल फेडेरेसनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा एक सूचना जारी गर्दै प्रतियोगिता रद्द भएको जनाएको हो । रद्द गर्नुको कारण भने खुलाइएको छैन् । च्याम्पियनसिपमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीकी गोलकिपर एन्जिला सुब्बा, डिफेन्डर गिता राना, मिडफिल्डर सरु […]
सडकपेटीमा किनेको एउटा किताबले बदलेको बाटो
२९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना शुक्रबार मध्यान्ह अत्यन्तै व्यस्त थिइन् । बालुवाटारस्थित कार्यकक्ष बाहिर भेटेर बधाई दिनेको लामो लाइन थियो भने टेलिफोनमार्फत बधाई दिनेलाई धन्यवाद मात्रै भन्न पनि उनलाई भ्याइ-नभ्याइ थियो । गत मंगलबार सरकारले निलम र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिको सूचना […]
टी-२० सिरिज : ज्ञानेन्द्र, पारस र वाटमोर कतार नजानुको कारण के हो ?
१७ माघ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आगामी मार्चमा ओमानमा आईसीसी विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत ट्राई सिरिज खेल्दैछ । ओमान नेपाल र अमेरिकाबीच हुने उक्त सिरिज आउन अब दुई महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । अमेरिकाले त्यही सिरिजका लागि ४४ खेलाडीलाई प्रारम्भिक चरणमा प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ । नेपालमा अहिले चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप पुरुष […]
नेपालले कतारमा टी २० क्रिकेट खेल्ने
१३ माघ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले कतारमा हुने क्रिकेट प्रतियाेगिता खेल्ने भएकाे छ । फेब्रुअरी ९ देखि १२ सम्म कतार स्पाेर्ट्स डे काे अवसरमा कतार क्रिकेट एसाेसिएसनले आयाेजना गर्ने बायाल्याट्रल टी २० आई सिरिजमा नेपालकाे राष्ट्रिय टिमलाई सहभागी गराउने निर्णय मंगलबारकाे क्यान बाेर्ड बैठकले गरेकाे हाे । नेपालले मार्चमा विश्वकप लिग २ अन्तर्गत […]
७ माघ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई इन्डियन प्रिमियर लिग फ्रेन्चाइज दिल्ली क्यापिटल्सले रिलिज गरेको छ । आईपीएलको १४औं संस्करण अघि दिल्लीले सन्दीपलाई फुकुवा गर्ने भएको हो । लगातार तीन वर्ष दिल्लीको टिममा रहेका सन्दीपलाई अब नयाँ टिमबाट आईपीएल खेल्ने बाटो खुलेको छ । आईपीएलको १३औं संस्करणमा सन्दीपले दिल्लीबाट एक खेल पनि […]
नेपाल क्लियरिङ हाउसले शुरु गर्यो ‘कर्पोरेट पे’ सेवा
२९ पुस, काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउसले बैंकहरुले संस्थागत ग्राहकहरुका निम्ति बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने गरी ‘कर्पोरेट पे’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाउसले ल्याएको ‘कर्पोरेट पे सेवा’को बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन गरे । २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सब्सक्राइभ गरिसकेको र केहि बैंहरुले शुरु समेत गरिसकेको हाउसका […]